ဒူချီရာတန်းတွင်ရခိုင်လုံထိန်းများကရိုဟင်ဂျာ ၂၀ ဦး အား သတ် ဖြတ် အလောင်း ဖျောက် ဆောင်း ပါး၊ New York Times | ဧရာဝတီ Irra Wadi
← US lauds Burma’s improving human rights record
ဦးရဲထွဋ်၊ ဦးဝင်းမြိုင်၊ Fortify Rights ဘယ်သူ့ ကိုယုံမလဲ →
ဒူချီရာတန်းတွင်ရခိုင်လုံထိန်းများကရိုဟင်ဂျာ ၂၀ ဦး အား သတ် ဖြတ် အလောင်း ဖျောက် ဆောင်း ပါး၊ New York Times	Posted on March 4, 2014	by irrawadi မှုရင်း-New York Times ဘာသာပြန်-စိုင်ဖုလ္လာဟ်(မြန်မာမွတ်စလင်မီဒီယာ)
ဒူချီရာတန်ရွာ၊ မြန်မာ။ ဇန်န၀ါရီ ၁၃ ရက်ည၊ လရောင်မှုန်ပြပြအောက်ဝယ် မိသားစုပိုင်ကွမ်းယာဆိုင်၌ ညစောင့် အိပ်နေသူ သားကြီး မူဟာမတ်(၁၅နှစ်အရွယ်)အား တရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားကြပုံကို မိခင်ဖြစ်သူ ဇော်ပသာ တစ်ယောက် သူမ၏ ၀ါးအိမ်လေးကလေးထဲမှ လှမ်းကြည့်ရုံသာ တတ်နိုင်သည်။
အဓမ္မဆွဲခေါ်သွားသူတွေက ကောင်လေးကို သေနတ်ဒင်နှင့် ထုရင်း ဖုန်ထူထူလမ်းပေါ် လဲကျသွား သည်အထိ ရိုက်နှက်ခဲ့ကြကြောင်း သူမက အင်တာဗျူးတွင် လက်ဟန်ခြေဟန်ဖြင့် ပြောပြသည်။
သူမလည်း ကြောက်လန့်တကြီး စပါးခင်းထဲသို့ ထွက်ပြေးခဲ့ရပြီး သားဖြစ်သူမှာ သေဆုံးသွားပြီဟု ယူဆ ရကြောင်း သူမကဆိုသည်။၀တ်ရုံအနက်ကို ၀တ်ဆင်ထားသော ဇိုယာက တံခါးသုံးပေါက် အကွာတွင် တံခါးချက်ကို ပြရင်း လက်နက်ကိုင် အုပ်စုက တံခါးကို ရိုက်ချိုးပြီး ဒရကြမ်းဝင်ရောက်ကာ ၁၄သားအရွယ် မုဟမ္မဒ်ကို ရိုက်နှိက်ကြောင်းနှင့် ထိုအချိန်မှစ၍ သူ့ကို မမြင်တွေ့ရတော့ကြောင်း သူမကဆိုသည်။
တစ်ညတည်းတွင် ဒူချီရာတန်ရွာ၌ တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးငယ် စုစုပေါင်း ၄၀ ထက်မနည်း သေဆုံးပြီး ကာလကြာရှည်ဖိနှိပ်ခံရသော ရိုဟင်ဂျာတို့အတွက် အဆိုးဝါး ဆုံး အကြမ်းဖက်ခံရမှုများအနက် တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂ၏ ပြောကြားချက်အရ လုံထိန်း တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ဒေသခံ အစွန်းရောက် ရခိုင်ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ၀င်များက ရခိုင်ရဲတပ်သားတစ်ဦးအား ရိုဟင်ဂျာတို့က ပြန်ပေးဆွဲ ထားခြင်းကြောင့် ဒေါသထွက်ကာ ၎င်းတို့ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။မြန်မာအစိုးရက နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကို ရှေ့ ရှုလျက် အဆိုပါကျေးရွာ၌ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော သတ်ဖြတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တွင်တွင်ငြင်း ဆိုခဲ့ သည်။ မြန်မာလူ့အခွင့်ရေးကော်မရှင်ကလည်း အဆိုပါ သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ “အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသော သတင်း”အဖြစ်သာ ဖော်ပြသည်။
သို့သော် ၁.၃ သန်းခန့်ရှိပြီး နိုင်ငံသားငြင်းပယ်ခံထားရသော ရိုဟင်ဂျာများအတွက် တိုးပွားလာနေ သော အကြမ်း ဖက်မှုလက္ခဏာများကို ကုလသမဂ္ဂက ရှာဖွေလျက်ရှိသည်။ကုလသမဂ္ဂနှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင် စုသို့ တင်သွင်းသည့် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်း၏ အစီရင်ခံစာတွင် အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ် ခံထားရသူများကို ဦးစွာတွေ့ရှိရသည့်အချက်မှာ ရိုဟင်ဂျာ ၁၀ ဦးခန့် ရေလှောင် ကန်ထဲ တွင် မြုပ်ချည်ပေါ်ချည်ဖြစ်နေကြောင်း တစ်ချို့မှာ ကလေးငယ်များ၏ ဦးခေါင်း များ ဖြစ်ကြောင်း တိုက် ခိုက်မှုအပြီး ဒေသတွင်းသို့ တိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်လာသူ မွတ်စလင် ၅ ဦးက တွေ့မြင် ခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
၎င်းတို့အနက်တစ်ဦးက စိတ်လှုပ်ရှားပြီး မျက်စိမှောက်ခြင်းလောဟု သံသယဖြစ်ကာ အဆိုပါ ရေလှောင် ကန်ထဲ သို့ လက်ဖြင့် သေချာအောင် စမ်းသပ်ကြည့်ခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုသည်။ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်း များ က ချမှတ်ခဲ့သော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းမှု ပေါ်လစီကို ကျယ် ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆက်လက် ကိုင်ဆွဲထားသည့်တိုင်အောင် သတ်ဖြတ်မှုများသည် အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တို့ကို အနည်းငယ် သာ ထိန်းသိမ်းခဲ့သည့် မြန်မာအစိုးရအတွက် စမ်းသပ်မှု တစ်ရပ် ဖြစ်သည်။
ရိုဟင်ဂျာအများစုနေထိုင်ရာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပြည်နယ်အစိုးရ၏ မွတ်စလင်တို့အား လှုပ်ရှား သွား လာ ခွင့် ကန့်သတ်ခြင်း၊ လုံလောက်စေ့ငှအောင် စီးပွားရှာခွင့်မရခြင်း စသည့် များစွာသော ကန့်သတ်ချုပ် ချယ်မှု တို့ကို မြန်မာ အစိုးက အားပေးထောက်ခံသည်။သယံဇာတပေါကြွယ်ဝပြီး အပျံ သင် စဒီမိုကရေစီ အောင်မြင်ရေးအတွက် စီးပွားရေးအကူအညီနှင့် စိတ်စေ တနာကောင်းများ ၀ိုင်းဝန်း ပုံအောနေချိန်တွင် သွေးထွက်သံယိုဖြစ်မှုများသည် ပြည်နယ် အစိုးရ အတွက် စိန်ခေါ်မှု တစ်ရပ်လည်း ဖြစ် သည်။ အဆိုပါနိုင်ငံများက ရိုဟင်ဂျာတို့အပေါ် ပြုမူဆက်ဆံပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အမြဲမပြတ် စိုးရိမ် လျက် ရှိပြီး အစိုးရ၏ ရပ်တည်ချက်ကို ပြောင်းလဲရန် အမျှော်လင့်ကြီး မျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။
သောကြာနေ့က လူနည်းစု မျိုးနွယ်ဝင်များကို ဆက်လက် ဖိနှိပ်ဖြိုခွဲမှုတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ယင်းမှာ အစိုးရက ရိုဟင်ဂျာတို့အတွက် အဓိကအားထားရာ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသော နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ့(MSF)ကို ရပ်တန့်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းအဖွဲ့ သည် ရိုဟင်ဂျာ အများအပြားကို ငှားရမ်းထားကြောင်း အစိုးရအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုနေထိုင်ရာတိုင်းပြည်တွင် ဝေဖန်ပုတ်ခတ်မှုကြာရှည်စွာ ခံစားခဲ့ရသော ရိုဟင်ဂျာ အများအပြားသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကတည်းက အလွန်ညံ့ဖျင်းသော ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် နေထိုင်ရပြီး ထွက်ခွာသွားလာခွင့်မရှိသကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်ခွင့်လည်း မရခဲ့ချေ။ ဒူချီရာတန်ကဲ့သို့သော ကျေးရွာများရှိ ရွာသားများကသာ ဒေသခံအာဏာပိုင်များ၏ သက်ညှာမှုဖြင့် အိမ်နှင့်ရာနှင့် နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့သည်။ အများစုက အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အုပ်စုတို့၏ လှုံ့ဆော်ခြင်းကို ခံရသည်။ ဘုန်းကြီးများက တိုင်းပြည်၏ လွတ်လပ်မှုအသစ်ကို အသုံးချပြီး ကျေးရွာအနှံ့ ဆိုင်ကယ်များဖြင့် လှည့်လည်သွားလာ ကာ မွတ်စလင်မုန်းတီးရေးများကို လှုံ့ဆော်ဟောကြားသည်။
နောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့သော အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုကိစ္စက အစိုးရအတွက် အလွန်အရေးပါ သည့် အာဆီယံအသင်း အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူချိန်၌ များစွာ ကသိကအောက်ဖြစ်ရသည်။ ဆတ်ဆတ်ထိမ ခံသော လက္ခဏာတစ်ရပ်အဖြစ် ဇန်န၀ါရီ ၁၃ ရက်နေ့ညက ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် ပြဿနာ သတင်းကို ရယူ ရန် ကျေးရွာ သို့ရောက်ရှိသွားသော New York Times မှ သတင်းထောက် ၂ဦးနှင့် ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ဦး ကို ဒေသခံရဲက တားဆီကာ ခေတ္တခေါ်ယူထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စစ်တွေမြို့တစ်ဝိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်တွင် အိမ်များမီး ဟုန်းဟုန်း တောက်လောင်ခဲ့ရပြီး ခန့်မှန်းခြေ ၃၀၀ ခန့် သေဆုံးခဲ့ရာ အများစုမှာ မွတ်စလင်များဖြစ်သည်။ ယင်းဖြစ် စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ တုန့်ပြန်ပုံက တချို့မျိုးရိုးစဉ်ဆက်နေထိုင်လာသော ရိုဟင်ဂျာ တို့ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ တရားမ၀င် ခိုးဝင်လာသူများဖြစ်၍ ကုလသမဂ္ဂ၏ အကူအညီနှင့် တတိယနိုင်ငံ သို့ နှင်ထုတ်ကာ ဖြေရှင်းသင့်သည်ဟူ၏။မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံ ထားကြ သည့်အတွက် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင် ဆန်း စုကြည် က ရိုဟင်ဂျာတို့အား ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့်ပတ် သက်၍ ပြည် တွင်း၌ ဝေဖန်လေ့မရှိ။ သူမ၏ အရေးတယူမရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လည်း ဘက်တစ်ဘက်မှ ပြောပါက တင်းမာမှု များကို ပိုမိုဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများ ကို ပြောဆိုသည်။ သူမ၏ အနောက် တိုင်း ထောက်ခံ သူများကမူ လာမည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ ဆန့်ကျင်မှုကို ရှောင်ရှားလို သည့် သဘောဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ကြသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်အတွင်း တခြားမွတ်စလင်အုပ်စုများကိုလည်း အလားတူ တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ် ခဲ့ သော် လည်း ရိုဟင်ဂျာတို့ကို အဓိကပစ်မှတ်ထား မလိုမုန်းထားပြုမှုများက ပို၍ လောင်ကျွမ်း လွယ်စေ သည်။ ၎င်းတို့အနက် အများစုမှာ ဗြိတိသျှကိုလိုနီလက်ထက်တွင် အိန္ဒိယမှ မောင်းသွင်းခံ လာရသူ များဖြစ်ပြီး မြန်မာမျိုးနွယ်အများစုက ၎င်းတို့ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ တရားမ၀င် ကျူးကျော် လာသူများအဖြစ် အထင်သေး ရှုတ်ချကြသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၂ ကြိမ်တိုင် တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် ရိုဟင်ဂျာ၏ အိမ်များ ဖျက်ဆီးခံရပြီး ၁သိန်း ၄သောင်းကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ စစ်တွေအနီးဝန်ကျင်၌ပင် ဒုက္ခသည်စခန်း ၂ဒါဇင်ကျော် ရှိသည်။ နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အဖွဲ့များအပေါ်တွင်သာ အဓိကမှီခို အားထား နေရပြီး မကြာခဏဆိုသလို ဒေသခံအာဏာပိုင်များ၏ ဒုက္ခပေး နှောက်ယှက်ခြင်းခံရသည်။ ရိုဟင်ဂျာ တို့မှာ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် ပိတ်လှောင်ခံရသဖြင့် နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့ဝင်များက ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လေဟာပြင်ထောင်ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။
သမ္မတရုံးမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ ဦးရဲထွဋ်က တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတွင် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ဒုက္ခသည်စခန်းများကို ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် အစီစဉ်ရှိခဲ့သော် လည်း ဘင်္ဂါလီများက သဘောမတူဘဲ ကျောက်ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်ခဲ့သောကြောင့် အစီအစဉ် ဆိုင်းငံ့ ထားရကြောင်း ဖြေကြားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် ၁၈ မြို့နယ်အနက် ၇ မြို့နယ်တွင် မွတ်စလင်များကို သူတို့ဆေးခန်းများ၌ ကုသ ခွင့် ပိတ်ပင်ထားကြောင်း နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေး ၀န်ထမ်းများက ဆိုသည်။ မကြာသေး ခင်က ရိုဟင်ဂျာ အရေးအထူးစုံစမ်းနေသော လူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည့် Fortify Rights အဖွဲ့က အာဏာပိုင် များ၏ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်အထောက်အထားများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ အစိုးရ၏ တရားဝင်အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်များအရ ခွင့်ပြုချက်ရှိမှ လက်ထပ် ထိမ်းမြားခွင့်ပေးခြင်းနှင့် ကလေးမွေးဖွားမှုကို ကန့်သတ်ခြင်းအပါအ၀င် ရိုဟင်ဂျာလူဦးရေ တိုးပွားမှုကို နှေးကွေးသွားစေရန် စနစ်တကျ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ထားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ သမ္မတရုံးမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မစ္စတာရဲထွဋ်ကမူ ယင်းတွေ့ရှိချက်အား “ဘင်္ဂါလီတွေဘက်က တဘက် သတ်အမြင်”အဖြစ် ပယ်ချလိုက်သည်။မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေသော ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ လွတ်မြောက် ရာအတွက် ၈၀,၀၀၀ နီးပါးရှိသော ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေး သူငယ် တို့သည် လူကုန်ကူးသူများမှတဆင့် မလေးရှား၊ ထိုင်းနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံများသို့ အန္တရာယ် များသော ပင်လယ်ရေကြောင်းခရီးဖြင့် ထွက်ပြေးကြရသည်။ တစ်ချို့ စက်လှေများ တိမ်းမှောက် ခဲ့ပြီး အများစုမှာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ထိန်းသိမ်းခံထားရကြောင်း အာရကန်ပရောဂျက်မှ ဒါရိုက်တာ Chris Lewa က ဆိုသည်။
ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်ခံ ဘ၀များ အသက် ၅၄ နှစ်အရွယ် မုဟမ္မဒ်ဖာရွတ်ခ်၏ မိသားစုမှာမူ ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် နေထိုင်သူများထက် အခြေအနေကောင်းသည်ဟု ဆိုရပေမည်။ ၎င်းတို့က စစ်တွေမြို့၏ စည်ပင်သောဈေး၊ ဗလီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကလေးများရော မွတ်စလင်ကလေးများပါ တက်ရောက်သင်ကြား သည့် မူလတန်းကျောင်းတို့ရှိရာ အစဉ်အလာကြီးမားသော ရိုဟင်ဂျာ ရပ်ကွက်လေးတွင် နေထိုင်ခဲ့ သူများဖြစ်သည့်အလျောက် ယခင်ဘ၀ကို ပုံဖော်နိုင်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။
၎င်းတို့က နှစ်ထပ်အုတ်ခံတိုက်လေး၏ အပေါ်ထပ်တွင်နေထိုင်ပြီး အောက်ထပ်တွင် စီးပွားရေး လုပ် ကိုင်သည်။ မြေနေရာမှာ အဘိုး၏ အဖေထံမှ အဆင့်ဆင့်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လတွင်မူ ရခိုင်လုံထိန်းများ၏အကူအညီဖြင့် လူအုပ်ကြီးက ဥစ္စာပစ္စည်းများကို မီးရှို့ဖျက် ဆီးခဲ့ကြပြီး လအနည်းငယ်အကြာတွင် အစိုးရက ၀န်းကျင်တစ်ခုလုံးရှိ လက်ကျန် အဆောက် အဦများကို ဘူဒိုဇာဖြင့် ရှင်းပစ်သည်။
မကြာသေးခင်က အဆိုပါ ၀န်းကျင်တစ်ခုလုံးသည် မြက်ပင် ပေါင်းပင်များ အပြိုင်းအရိုင်းထကာ ပလက်စတစ် အမှိုက်များ လေထဲ၌ တလူလူလွင့်နေသည်။ ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာတို့ ရင်းရင်းနှီးနှီး စည်စည် ပင်ပင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခဲ့ကြသော ဈေးနေရာလေး၌ ချောက်ခြားဖွယ်ရာ ငြိမ်သက်မှု တစ်ခုက လွှမ်းမိုးထားသည်။ထိုနေရာလေးကို ခေတ္တခဏသွားကြည့်ရန်အတွက် ရဲအရာရှိတစ်ဦးထံ လဘ် ထိုးနိုင်သော် လည်း မုဟမ္မဒ်ဖာ ရွတ်ခ် ဘယ်တော့မှ ပြန်မသွား။“ကျွန်တော် ဘာကြောင့် ပြန်မ သွား ရတာလဲ သိလား”ဟု မေးရင်း ဒန်းဆိုးထားသော မုတ်ဆိတ်ကို စမ်းပြကာ မွတ်စ လင်ဖြစ်သည့် အတွက်ကြောင့် အနားမကပ်နိုင်ဆိုသည့် သဘောပြောသည်။ “တကယ်လို့ ကျွန်တော် ပြန် သွားခဲ့ရင် ” သူ့လည်ပင်းကို ဖြတ်ပစ်သည့် လက်ဟန်ဖြင့်ပြရင်း “အဲဒီမှာ ကျွန်တော့် အလောင်း ကို ခင်ဗျား တွေ့ ရလိမ့်မယ်”ဟု ဆိုသည်။
၎င်းသည် ရခိုင်အစိုးရက ရိုဟင်ဂျာများ နေထိုင်ရန် တည်ဆောက်ထားသော ဒုက္ခသည်စခန်းအနီးရှိ မွတ်စလင်ရွာလေးတွင် တောင့်တင်းခိုင်မာမှုမရှိသော ၀ါးအိမ်သစ်လေးကို ဆောက်လုပ်နေထိုင်ခဲ့ သည်။“ကျွန်တော်တစ်ခါမှဝါးအိမ်နဲ့မနေဖူးဘူး”ဟု၎င်းကဆိုသည်။ဖာရွတ်ခ် ၏ သား အသက် ၂၈ နှစ် အရွယ် ရွှေမောင်သန်းဆိုသူသည် စစ်တွေ တက္ကသိုလ်မှ ဇီဝဗေဒ ဘာသာရပ်ဖြင့် ဘွဲ့ရခဲ့သည်။ ၎င်းဘွဲ့ရချိန်က ရိုဟင်ဂျာများကို အစိုးရက ကျောင်းများမှ မနှင်ထုတ်သေး။ ၎င်းသည် စခန်းမှ ခိုးထွက်လေ့မရှိသော်လည်း မိခင်ဖြစ်သူ နေ မကောင်းဖြစ်ချိန် ကမူ ဆေးရုံသွား ရန်အတွက် ၂ ကြိမ်တိုင် ကြိုးစားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ မိခင်ဖြစ်သူမှာ ဆေးဝါးလုံလောက်မှု မရှိသည့်အတွက် ပြီးခဲ့သည့် ဇန်န၀ါရီလတွင် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရိုဟင်ဂျာဆရာဝန်ဆိုလို့ ဒေါက်တာထွန်းအောင် တစ်ယောက်သာရှိသည်။ ၎င်းမှာ လည်း ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေအရ ရိုဟင်ဂျာများ ဆေးတက္ကသိုလ်တက်ခွင့်မပြုခင်က ဆရာဝန် ဖြစ်ခဲ့ သူပင်။ ၎င်းမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အကြမ်းဖက်မှုကြီးပြီးနောက် အဖမ်းခံရသည်။ ၎င်းအား လွှတ်ပေးရန် အမေရိကန် က အစိုးရထံ တောင်းဆိုထားသော်လည်း အကြမ်ဖက်မှု လှုံ့ဆော်သည့်အတွက်ဟု ဆိုကာ ထောင် သွင်း အကျဉ်းချထားဆဲဖြစ်သည်။
စိုးထိတ်ဗျာပွေကာလရှည် လူဦးရေ ၂.၁ သန်းခန့်ရှိပြီး မိမိတို့ ဘုရင့်နိုင်ငံတော်နှင့်ပတ်သက်၍ ဂုဏ် ယူလေ့ရှိသော ရခိုင်လူမျိုးတို့သည် ရိုဟင်ဂျာတို့၏ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်သော မွေးဖွားနှုန်း များကြောင့် ကြောက် ရွံ့နေ ကြရကြောင်း မကြာသေးခင်က စင်ကာပူ နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးကျောင်းမှ အကြီး တန်း သုတေသီ တစ်ဦးဖြစ်သူ မြန်မာနိုင်ငံသား ကျော်ဆန်းဝေ၏ ဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြထားသည်။ တစ်တိုင်းပြည်လုံးမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုကလည်း အလားတူ စိုးရိမ်ပူပန်ကြသည်ဟူ၏။
၁၉၈၃ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှု မရှိခဲ့သဖြင့် ဖွား/သေ နှုန်းစာရင်းများမှာ တိတိ ကျကျမ ရှိ။ မြန်မာနှင့် နိုင်ငံတကာက ၅၅ သန်းရှိသော မြန်မာ့လူဦးရေတွင် ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် များဖြစ်ပြီး ၄ ရာခိုင်နှုန်းကသာ မွတ်စလင်များဖြစ်ကြောင်း ယေဘုယျအားဖြင့် လက်ခံထား သည်။ ရိုဟင်ဂျာတို့မှာ ထိုမွတ်စလင်ရာခိုင်နှုန်းအနက်မှပင်ဖြစ်သော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ လူများစုကြီး က ကြောက်ရွံ့နေရခြင်းမှာ ယုတ္တိမတန်သည့်တိုင်အောင် ယင်းမှာ အမှန်တကယ် ဖြစ်ကြောင်း သုတေသီ က ဆိုသည်။“ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်တွေကြား မှာ မကြာခင် ဗုဒ္ဓဘာ သာကွယ်ပျောက်တော့ မယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက် ပျံ့နှံ့နေပါတယ် ”ဟု ၎င်းက ရေးသားဖော်ပြသည်။
တိုင်းပြည်ကို မွတ်စလင်တို့ သိမ်းပိုက်နိုင်သည့် အခွင့်အလန်းနည်းပါးသော်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိနေသော မွတ်စလင်ပမာဏက ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံရေးအရ ရပ်တည်မှုကို ဖန်တီးပေးစွမ်းနိုင်သည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဗဟိုအစိုးရက ရိုဟင်ဂျာတို့အား နိုင်ငံသားအခွင့်ရေး မပေးသော် လည်း မဲပေးခွင့်ပြုခဲ့သည်။ စစ်တွေတွင် ရခိုင်ကိုယ်စားလှယ်က ဆန္ဒမဲ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အနိုင် ရခဲ့ပြီး ရိုဟင်ဂျာကိုယ်စားလှယ်က ဆန္ဒမဲ ၄၈ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိခဲ့ကြောင်း ရခိုင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီမှ ဦးခိုင်ပြည်စိုးက ဆိုသည်။ ဦးခိုင်ပြည်စိုးအပါအ၀င် အခြားအာဏာပိုင်များက လာမည့်နှစ်တွင် ရိုဟင်ဂျာတို့ အား မဲပေးခွင့်ပြုတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရခိုင်လူငယ် အများစုမှာ ဆင်းရဲချွတ်ခြုံကျနေသာ ဒေသကို စွန့်ခွာပြီး တခြားဒေသများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် အတွက် ရောက်ရှိ သွားသောကြောင့် မဲရလာဒ်မှာ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားနိုင်သည်။
ဒူချီရာတန် တိုက်ခိုက်မှုမတိုင်မီရက်များက အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာလှုပ်ရှားမှု ၉၆၉ မှ ဘုန်းကြီးများ အနီးနားရှိ မြို့သို့ လာရောက်ခဲ့ကြသည်။ အရာရှိအချို့က မနှစ်သက်သော်လည်း ဗဟိုအစိုးရနှင့် သင့်မြတ်သော အဆိုပါ ဘုန်းကြီးများက မြန်မာပြည်အနှံ့လှည့်လည်ကာ မွတ်စလင်မုန်းတီးရေး လှုံ့ဆော် တရားများ ဟောကြားသည်။သတ်ဖြတ်မှုများနှင့် ဘုန်းကြီးများအကြား တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ် မှုမတွေ့ ရသော်လည်း ၎င်းတို့၏ မုန်းတီးရေးလှုံ့ဆော်မှုများက ကြွေးကြော်နေသော ရခိုင်သား များအား လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှုများ ပိုမိုတိုးပွား ကိန်းအောင်းစေခဲ့သည်။ ယခုအခါ ယင်းလှုံ့ဆော်မှုများ က ပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး အတွက် အလွန် အန္တရာယ်ကြီးမားသည်ဟု ခံစားရကြောင်း အလယ်အလတ်သမား ရခိုင်သား တို့က ဆိုသည်။
ကုလသမဂ္ဂနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဒူချီရာတန်တွင် သတ်ဖြတ်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာ အစိုးရအား ဖိအားပေးဆဲဖြစ်ပြီး မြန်မာအစိုးရက လျင်မြန်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ၂ခုကို ပြုပြီးနောက် ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်သော အခြားမွတ်စလင်တစ်ဦးပါဝင်သည့် နောက်ထပ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ရပ် ပြုလုပ်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ သည်။အဆိုပါ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ရှုတ်ထွေးနိုင်သောအချက်တစ်ချက်မှာ ကုလသမဂ္ဂ အစီရင် ခံစာ တွင် ဖော်ပြ ထားချက် အရ ပြဿနာဖြစ်ပြီးနောက် ရခိုင်လုံထိန်းများသည် လူသတ်မှုကို ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် လူသေ အလောင်း ၂၀ ကို တောင်ပတ်ဝန်းကျင်သို့ သယ်ဆောင်သွားကြောင်း အနီးနားရှိ ရွာသား များက တွေ့မြင် ခဲ့ရသည်။ ခုတ်ထစ် သတ်ဖြတ် မှုပြီးပြီးချင်း ဒဏ်ရာရရှိသူ ၂၂ ဦးနှင့် ဒုက္ခ ရောက်လာသော ရွာသားများက နယ်စည်းမထား ဆရာဝန် များအဖွဲ့မှ ဖွင့်လှစ်ထား သည့် ကျေးလက် ကျန်းမာရေး ဆေးခန်းသို့ အကူအညီတောင်းရန် ရောက်လာခဲ့ကြောင်း ယင်း အဖွဲ့ကဆို သည်။
တစ်ချို့အမျိုးသမီးများမှာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည့်အတွက် စိတ် ဒဏ် ရာ ရရှိ ခဲ့ကြောင်း အကူအညီပေးရေး ၀န်ထမ်းများက ပြောဆိုသည်။ တချို့ရွာသားများမှာ မိမိတို့ပိုင် ပစ္စည်း များကို ပြန်လည်စစ်ဆေးရန်နှင့် အခြေအနေကို စူးစမ်းရန် ပြန်သွားခဲ့ သည်။ သားဖြစ်သူအား ကွမ်းယာဆိုင်မှ ဖမ်းခေါ်သွားခြင်းခံရသူ ဇော်ပသာမှာ ၎င်း၏ နွားများခိုးခံရပြီး ၎င်းပိုင်ပစ္စည်းများလည်း လုယက်ခံရကြောင်း တွေ့ခဲ့ရသည်။
သူမအိမ်နှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင်ရှိသော ကျောင်းလေးတွင် သွေးများ ပေကျံစွန်းထင်းနေမှုက သူမ အား ဝေးဝေး၌ နေရန် သတိပေးလျက်ရှိသည်။“ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ကပ်နေတဲ့ ဒေသမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ လူဦးရေ တိုးပွားမှုကို ရခိုင်တွေ စိုးရိမ်တာနဲ့ ပတ် သက်ပြီး အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ နားလည်ပါ တယ်၊ ဒါပေမယ့် တပြိုင်တည်းမှာ ၁.၃ သန်းလောက် ရှိတဲ့ ဒီလူတွေကို အပျောက်ရှင်း ဖို့ကတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး”ဟု နိုင်ငံတကာအကူအညီ ပေးရေး ၀န်ထမ်းက ပြောဆိုသည်။
ဒူချီရာတန်း တွင် အကြမ်းဖက်မူ၏ အထောက်အထားတစ်ရပ်အဖြစ် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် စာအုပ်များ ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးထားပုံ(ဓာတ်ပုံ- Adam Dean/ The New York Times)
New York Times တွင် ဖော်ပြပါရှိသော “Rise in Bigotry Fuels Massacre Inside Myanmar” ကို စိုင်ဖုလ္လာဟ်(မြန်မာမွတ်စလင်မီဒီယာ)က ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
This entry was posted in အထူးသတင်း, အထူးဆောင်းပါး. Bookmark the permalink.	← US lauds Burma’s improving human rights record
ဧရာဝတီ Irra Wadi	Blog at WordPress.com.